Nhasi unogona kuwana chinetso cheZuva reMadzimai Enyika | Ndinobva mac
Nhasi unogona kuwana chinetso cheZuva Revakadzi reInternational
Mazuva mashoma apfuura takagovana newe kusvika kweiyi Dambudziko nyowani kune vashandisi veApple Watch uye nhasi izuva. Dambudziko reZuva reMarudzi reVakadzi riri nyore kwazvo kuwana nguva ino uye chero munhu anogona kuwana menduru uye zvinamirwa zvinogona kutumirwa muchimiro chemameseji anopiwa neiyi dambudziko nyowani.
Ndiwe wechipiri waKurume uye mune ino kesi kuti uzviite isu tinofanirwa chete kuita a Ini ndinodzidzira kwemaminitsi makumi maviri kana kudarika neApple Watch yedu. Zvine musoro kuti dambudziko rinowanikwa chete kune vashandisi vane iyo Apple wachi asi kunyangwe kana iwe usina, unogona kuita kurovedza muviri uye nekudaro unovandudza hutano hwako.
Saka une zuva rese rekutora menduru iyi uye uzadzise chinangwa chekupedzisa kurovedza kwemaminitsi makumi maviri kana kudarika. Chinhu chakakosha murudzi urwu rwekupokana hakusi kuwana menduru, iri zvakare tora iyo "dosi" yehutano izvo zvinonakidza kwazvo. Iko kudzidziswa kunofanira kuitiswa hakuratidzwe, inogona kuve chero dzidziso yatinayo pane iyo wachi.
Kwemwedzi unotevera zvinopfuura chokwadi chekuti Apple ine rimwe dambudziko rakagadzirirwa isu uye panguva ino tiri kutaura nezveZuva rePasi, dambudziko richazosvika zvechokwadi mumwedzi waApril kune vashandisi vane Apple Watch. Pazvinoitika izvi, isu ticha tarisa padambudziko nyowani nhasi, Muvhuro, Kurume 8, uye zvine musoro tiri kuenda kutora menduru kukiya yedu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Nhasi unogona kuwana chinetso cheZuva Revakadzi reInternational
Apple inogadziridza Final Cut Pro, iMovie, Compressor uye Motion panguva imwe chete
Sonos Roam inodonha nyowani inotakurika Sonos mutauri